Wood Wood Edge Banding - China Miti Yezvirimwa Zvokutengesa Mbambo Mutengesi, Factory -HengSu Edging
musha » Products » Edge Banding » PVC Edge Banding
Wood Wood Edge Banding
The woodgrain dzakatevedzana inosanganisira zvakawanda vivid.natural huni zviyo, The ruvara uye zviyo pamwe nevapfumi gradation uye wakajeka chaizvoizvo zviri akafanana yakatsvuka huni, unogona kunowirirana zvakanaka pechiso bhodhi.
pvc woodgrain yakavaraidza uye yakadhindwa nemarudzi ose emapuranga emhando, iyo michina ine yakakwirira yakagadzirwa nemiti yehuni, inosimba Yakasimba yakasimba, yakasimba uye inogara kwenguva refu, ruvara haruzoperi uye haruzopfeki chena pashure pokugadzira. Uye tinogona kuita zvose kuti woodgrain ruvara enzanirana maererano chikumbiro vatengi vake.
PVC (polyvinyl chloride) ndiyo nhasi imwe yakanakisisa inozivikanwa uye Inonyanya mapurasitiki. Kwerinopfuura 40 makore edgebands nokuti midziyo indasitiri uyewo kunge kugadzirwa kubva chino uye rakava kubudirira chaizvo nokuda kunoshamisa zvinhu zvavo unhu. In kunyanya, ndicho rakaisvonaka kubudiswa zvinoitwa PVC nokuda mafomu chaizvo yakabatsira kuti budiriro yaro midziyo mukugadzira pamusika.
200m pamusara, 10 mipumburu pa carton.also inogona kutakura sezvinodiwa nevatengi
Vatengi vanogona kusarudza kutakura kwegungwa kana kutakura kwemhepo
Mamwe Mapurogiramu Akasiyana